Talooyin: Haweeney waxay la wadaagtaa khiyaamo sahlan oo caawisa ciribtirka dhanjafka ah ee xasaasiyadda 20 - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO »Talooyin: Haweeney waxay la wadaagtaa khiyaamo sahlan oo caawisa nabarrada dhanjafka ah ee xasaasiga ah ee 20
Talooyin: Haweeney waxay la wadaagtaa khiyaamo sahlan oo caawisa nabarrada dhanjafsan ee xasaasiga ah ee 20
Haweeneydu waxay la wadaagtaa khiyaamo fudud oo caawiya si loo yareeyo xuubka madax-xannibaad la'aanta ee daqiiqadaha 20
Abriil 1, 2019 17: 49 By Fabiosa
Qabo dhanjafka maaha mid dhif ah aduunyada casriga ah. Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in 12% dadka Maraykanka ah ay qabaan. Laakiin maxaad sameyn kartaa si aad u yaraato xanuunka aan loo adkaysan karin, ama si buuxda looga takhaluso?
Haweeney ayaa la ogaaday in ay aad u yartahay, laakiin khiyaano aan caadi ahayn.
Daaweynta aan la fileynin ee ka dhanka ah dhanjafka
Haweeney ku taal Indiana waxay ogaatay daawo mucjiso ah xanuunka dhanjafka, taas oo ka caawisay in ay xanuunka joojiso daqiiqado. Elizabeth Hayes ayaa ka soo jeeda murugo rabshado wata, taasoo socon karta illaa laba iyo toban saacadood, laakiin waxay ku guulaysatay inay xal u hesho problème, jikadiisii.
Hayes ayaa sheegtay in cunto fudud oo fudud ay u ogolaatay inuu ka takhaluso xanuunka daran ee 20 kaliya. Waxay sheegtay in dhibaatadeeda ay gaari karto "xadid la'aanta", sidaa daraadeed xataa xitaa xanuun joojiyayaashu mar dambe kama caawiyaan. Waxay ku qasbaneyd inay raadiso siyaabo kale oo ay nafteeda u dhisto.
Waxay bilaabeen inay bartaan oo ku saabsan daawooyinka dabiiciga ah kaa caawin karta iyo tani waa sida ay heleen shirkadda in uu isticmaalaa walxihii gaar ah si ay u abuuraan cadaadis ku saabsan gacanta Li 4.
Elizabeth waxa uu dareemay waxyaabahan oo uu go'aansaday inuu isku dayo inuu la mid yahay cunnooyinka cuntada, isaga oo udhigma suulka iyo farta. Oo waxay u shaqaysay sida magiciisii ​​u macaan.
Waxay la talisay taladani Facebook, mana aha wax la yaab leh, waxay ku noqotay fayras ku saabsan arrin daqiiqado ah.
Maxay dadku ka fikiraan khiyaanadiisa?
Adiga oo tan sameeya tan iyo markii aan ahaa 12
- John Collins (@johninboro) March 4, 2019
Tani waxaan sameynayaa tan iyo markii aan jirey 12 sano.
Qof ayaa i siiyay waraaqdan ku saabsan 20 sano ka hor. Mararka qaarkood waan sameeyaa. Ha ka takhaluso jafafka laakiin waxay dareemayaan wanaag. Murugo ku saabsan clip ee sawirka? Waxay u egtahay sida cinjirrada loo isticmaalo in la xiro bac caag ah? 🤔
- Jane Whelan (@janewhelan) March 5, 2019
Qof ayaa i siiyey taladan, waxaa jira sanado XNUM. Mararka qaarkood, waxaan isticmaalaa. Lagama takhalusi karo xanuunka dhanjafka, laakiin waad dareemeysaa. Waxaad xiiseyneysaa clip clip ee sawirka? Tani waxay u egtahay kaltanka loo isticmaalo in lagu xiro bacaha balaastigga ah.
Weligaa ma waxaad dooratay nidaam aan caadi aheyn si aad uga takhalustid madax xanuun?
Maqaalkani waxaa loogu talogalay ujeedooyinka macluumaadka kaliya. Qaar ka mid ah alaabta iyo walxaha ku xusan qodobkan waxay keeni karaan xasaasiyad xasaasiyad leh waxayna saameyn ku yeelan kartaa caafimaadkaaga. Ka hor intaadan isticmaalin, la tasho farsamo yaqaan / khabiir. Guddiga Xukunka looma ciqaabi doono wixii khalal ah ama natiijo kale oo keeni karta isticmaalka hababka, alaabooyinka ama walxaha lagu qeexay qodobkan.
Android Smartphones oo ka hooseysa 200 Euros - Talooyin
Astrology: waxa kuu sugaya Arbacada 10 april 2019 sida ku cad calaamadda calaamadahaaga - CAYAARKA PLUS MAGA